Ọrụ Prototyping Ngwa ngwa, imepụta ngwa ngwa - Createproto
Rapid Ọgwụ na ịkpụzi
Nkedo Urethane Vacuum
Nrụpụta obere olu
Ihe akaebe nke echiche
Nnwale arụ ọrụ
Kedu ihe kpatara Createproto
Site na Chepụta ruo Prototyping ruo Mmepụta, anyị na -adị njikere mgbe niile ịtụgharị echiche gị ka ọ bụrụ eziokwu ma nye usoro nrụpụta dị elu maka ngwaahịa gị.
Ngwa Prototyping & Manufacturing
Anyị bụ ndị mmekọ R&D gị a pụrụ ịdabere na ya. Site na imewe CAD gaa na ụdị anụ ahụ n'aka gị, n'ikpeazụ nye ndị otu gị, ọ na -adị ọsọ ọsọ karịa mgbe ọ bụla. Anyị arụpụtala teknụzụ mmepụta ngwa ngwa ọhụrụ iji zute nsogbu ịma aka gị, anyị na gị ga -arụkọ ọrụ iji nyochaa ma melite echiche ngwaahịa gị, nnwale nnwale, na nyocha injinịa. Ọrụ nnomi ngwa ngwa anyị gụnyere prototyping CNC, mbipụta 3D, nkedo oghere, ngwa ngwa, ihe nchara mpempe akwụkwọ, na imecha ihe ngosi.
Ka ị na -aga n'ihu njem gị nke iwulite na iweta ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa, ị nwere ọtụtụ mkpebi ị ga -eme ma a bịa n'ịmepụta ihe - ma ị ga -ebido ngwa ọrụ ma ọ bụ ngwa ngwanrọ, ma ọ bụ nchikota ha abụọ - ị ga -enwerịrị ihe ngosi. Mgbe ị tọrọ ntọala nke ọma maka usoro mmepe wee kwadebere gị ụdị CAD, ị ga -abịa na nhọrọ ọzọ. Tupu ịmepụta ihe nrụpụta gị, ịkwesịrị ikpebi ụdị ụdị ihe ị ga -ewu. Ma ị na -eme ya n'onwe gị ma ọ bụ na -akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ na -emepụta ngwa ngwa, ịkwesịrị ịma ebumnuche ebumnuche gị ga -emezu n'ihi na ọ ga -enyere aka ịhọrọ ụzọ, usoro na akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka iwu ụlọ. N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị gafee ụdị ihe atụ na ebumnuche dị n'azụ iwu ha.
Createproto. Akụrụngwa ọnụ ọnụ.
Mgbe ị na-agbakwunye CreateProto na ndị otu gị, ị ga-enweta ụgwọ ọrụ nke ahụmịhe afọ iri jikọtara na ihe ọmụma na nka na njedebe teknụzụ. Nchikota a na-enye anyị ohere ịnye igwe nrụpụta pụrụ iche na nrụpụta nrụpụta site na iji ụdị ọla niile, plastik na ihe pụrụ iche, na-ahazi oge niile yana nke kacha mma ị nwere ike ịdabere na ya.
Welie akụkụ KPỌTỤRỤ ANYỊ
Otu esi eso anyị arụ ọrụ
Bulite faịlụ CAD
Iji bido, naanị họrọ usoro nrụpụta wee bulite faịlụ CAD 3D.
Anyị nwere ike ịnabata ụdị faịlụ ndị a:
> Ntụpụ ụkwụ (.stp)
> Parasolid (.x_t ma ọ bụ .x_b)
> .stl faịlụ:
Lelee faịlụ ndị nabatara
Zoo faịlụ ndị nabatara
A na -eme nyocha nyocha
N'ime awa ole na ole, anyị ga-ezitere gị imewe maka nrụpụta nrụpụta (DFM) yana ịnye ọnụahịa ozugbo.
Tinyere ọnụahịa ziri ezi,
nkwupụta mmekọrịta anyị ga -akpọpụta ihe ọ bụla siri ike imepụta atụmatụ dabere
na usoro nrụpụta ị họrọla. Nke a nwere ike ịdị site na ihe siri ike ịkpụ mgbada ruo oghere miri emi n'akụkụ akụkụ.
Ozugbo ị tụlere nkwupụta gị wee tinye iwu gị, anyị ga -amalite usoro nrụpụta. Anyị na -enyekwa nhọrọ mmecha.
Anyị na -enye nhọrọ mmecha dị iche iche maka ọrụ nrụpụta niile. Ndị a nwere ike site na mkpuchi mkpuchi uzuzu na anodizing ruo mgbakọ bụ isi na ntinye eri.
>CNC igwe anaghị agba nchara
> Nkedo Urethane Vacuum
> Mbipụta 3D:
A na -ebufe akụkụ!
Usoro nrụpụta dijitalụ anyị na -enye anyị ohere imepụta akụkụ dị ka ụbọchị 3.
Ihe ịga nke ọma n'ofe ụlọ ọrụ
Hụ ka ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ n'ụwa si eji nrụpụta dijitalụ maka imepụta ngwa ngwa na mmepụta ihe achọrọ. Anyị na-ejere ọtụtụ ụlọ ọrụ sitere na ngwaọrụ ahụike na-azọpụta ndụ gaa na ngwa injin aerospace.
HỤ ụlọ ọrụ na -eje ozi
102, Ụlọ nke atọ, Tanglian 3 Street, Tangxia Town, Dongguan, 523710
Prototyping ngwa ngwa, Ngwa ngagharị na nrụpụta, Prototyping CNC, Ọrụ mbipụta & ngwa ngwa ịpịpụta ihe, Ịgbasa ngwa ngwa, Nkọwapụta ọsọ ọsọ nke CNC,